कथा/नाटक/निबन्ध | Ratopati
बालकथा : चकचके बालक access_timeअसार १९, २०७९
परापूर्व कालमा एउटा गाउँमा निकै चकचके बालक थियो । ऊ न चकचक नगरी बस्न सक्थ्यो न कुनै उट्पट्याङ् काम नगरी चैन मिल्थ्यो । उसको व्यवहारले घरपरिवार दिक्कथे, गाउँलेहरू हैरान । बाबुआमाले निकै सुधार्ने प्रयास गरे । पढाइ लेखाइमा लगाए, स्कूल भर्ना गराए तर सबै व्यर्थ । पढ्न लेख्न त...
पौराणिक कथा : मानव जातिका इतिहास access_timeअसार १७, २०७९
प्राचीन कालमा ययाति नामका सम्राट् थिए । चन्द्रमाको वंशमा जन्मेका यी सम्राट्को राजधानी हाल भारतीय भूभागमा पर्ने लखनउ आसपास थियो । एकपटक उनी दिग्विजय गर्दै हिँडेका थिए । बाटामा शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानीलाई भेटे, जो त्यतिबेला साथी शर्मिष्ठाका कारण इनारमा डुबेकी थ...
कश्यपको कथा : किसानको किस्मत access_timeअसार १३, २०७९
धेरै पहिलेको कुरा हो । एक जना किसानको तीन भाइ छोरा थिए । किसान मिहिनेती थिए कडा श्रम गर्थे, फसल उमार्थे तर छोराहरू भने साह्रै अल्छी स्वभावकाथे । कहिले लठैतहरू जम्मा गरी गफ चुटेर दिन बिताउँथे कहिले चौतारमा दिनभर बाघचाल खेलेर साँझ घर फर्कन्थे । विचरा किसान दिनभर ...
कश्यपको कथा : जुत्तापुराण access_timeजेठ २२, २०७९
धेरै पहिलेको कुरा हो । एकादेशमा एक मुडी सामन्त थिए । शासकहरु प्रायः मुडी नै हुन्छन् । हमेशा जनताको नाम दिएर आफ्नै विचार र सिद्धान्त लाद्ने प्रयास गर्छन् । त्यसमा पनि उनी अलि बढी नै थिए । उनको भनाइ कानून बन्थ्यो, जे पनि गर्नैपर्थ्यो । तत्काललाई हेरेर निर्णय गर्थे, मूल्य देश...
किन नालीमा गिर्नुपर्‍यो न्यायाधीशका बाबुआमा ? access_timeजेठ १८, २०७९
धेरै पहिलेको कुरा हो । एउटा गाउँमा सुन्दर हाँसका जोडी बस्थे । उनीहरूका बीचमा गहिरो प्रेम थियो । दुवै मिलेर बस्थे, दिनभर पोखरीहरूमा घुम्न जान्थे, मीठामीठा कुरा गर्दै विभिन्न दृष्यहरू हेरी साँझ फर्कन्थे । समय बित्दै गयो । एक दिन साँझ उनीहरूका घरमा एउटा काग बास माग्न ...
बालकथा : एकलकाटे चमेरोको दुर्दशा access_timeबैशाख २८, २०७९
धेरै पहिलेको कुरा हो । एकपटक पशु र पक्षीहरूबीच कुनै विषयलाई लिएर मनमुटाव भयो । भनिन्छ, बिउ र निहुँलाई धेरै चाहिन्न, उसलाई टुसाउन मात्र बेर हो, झाङ्गिन वा फैलिन बेर लाग्दैन । यहाँ पनि यस्तै भयो । उनीहरूका मनमुटाव बढ्दै गएर युद्धको रूप लियो । पशुहरू एकातर्फ लागे, ...
कश्यपको कथा : अति लोभका परिणाम access_timeबैशाख २५, २०७९
कुनै समयमा पुरञ्जनपुरमा असमञ्जस नामका राजा थिए । उनले एकदिन राति सपनामा आकाशका झुण्डिएको सुन्दर शहर देखे । शहर जति सुन्दर थियो घर तथा महलहरू त्यति नै कलात्मक थिए । कतै स्वच्छ पानीको तलाउ थियो, कतै सुन्दर बगैँचाहरू देखिन्थे । कतै घोडातवला देखिन्थे कतै हात्तीसारहरू थ...
स्याल र गधाले किन ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ? access_timeबैशाख १८, २०७९
धेरै पहिलेको कुरा हो, एउटा वनमा धूर्त स्याल बस्थ्यो । धुत्याईँमा उसलाई कसैले जित्न सक्दैनथ्यो । अनेक बहाना पारी सिधासादा जनावरलाई जालमा फसाएर स्वार्थ पूरा गर्ने उसको बानी थियो । निमुखा जनावरहरू उसको चिल्लो कुरामा फसेर कति बेला आहार बन्न पुग्थे पत्तै पाउँदैन थिए । एक ...
यसरी काटिएको थियो राजगुरुको टुप्पी access_timeचैत ३०, २०७८
कथा निकै पुरानो हो । एउटा कुनै देशमा हरिदास नामका एक धार्मिक स्वभावका राजा थिए । पूजापाठ तथा देवीदेवताको आराधना बढी रुचाउँथे । दरवार परिसरमा भगवान् विष्णुको मन्दिर बनाउन लगाएका थिए, जहाँ नित्य पूजा तथा आरती हुन्थ्यो । यो काम रामदास नामका पुजारीले गर्दै आएका थिए...
कश्यपको कथा : बुद्धिबलको करामत access_timeचैत १३, २०७८
बल र बुद्धि कुन ठूलो भन्नेबारे लामै बहस चल्दै आएको छ । बल ठूलो भन्नेहरू पनि छन्, बुद्धि ठूलो भन्नेहरू पनि छन् । सरसर्ती हेर्दा दुवै ठीकै लाग्छन् पनि तर यी लागेका मात्र हुन् । वास्तविकता होइनन् । यथार्थमा यही हो कि बलभन्दा बुद्धिकै महत्व बढी हुन्छ । कठिन परिस्थितिमा बुद्धिले ...
वैदिक कथा : सत्यकाम र उनका शिक्षा access_timeचैत ३, २०७८
सामवेद अन्तरगत पर्ने छान्दज्ञोपनिषद्मा एउटा कथा छ । परापूर्वकालमा जावाला नामकी एक गरीब महिला थिइन् । गाउँको छेउमा एउटा झुपडी बनाएर बस्दै आएकी जावालाको जवानीमा मजबुरीको फाइदा उठाएर सौन्दर्य लुट्ने सयौँ भए पनि वृद्धावस्थामा साथ दिने कोही थिएनन् । त्यसैले बुढेसकालमा जन्म...
कश्यपको कथा : आफैँले खनेको खाल्टोमा यसरी परे व्यापारी access_timeफागुन २८, २०७८
परापूर्व कालमा कुनै गाउँमा एक व्यापारी थिए । उनी निकै चलाख र धूर्त थिए । गाउँलेहरू जति सिधा थिए त्यत्तिकै गरीब पनि । सेठ यसैलाई भजाएर विभिन्न बहाना पारी पैसा असूल्ने गर्थे । गाह्रो अफ्ठ्यारो पर्दा सहयोग गरे जस्तो गर्थे तर मौका मिल्नासाथ एकको चार बनाउन पुगिसकेका हुन्थे...
कश्यपको कथा : धूर्त ज्योतिषको करामत access_timeफागुन १३, २०७८
धेरै पहिलेको कुरा हो । एउटा गाउँमा एक जना धूर्त ज्योतिष बस्थे । ज्योतिषको नाममा ज पनि जान्दैनथे । तैपनि चिनाटिप्पन हेरे जस्तो गरी ठगीधन्दा चलाउँदै आएका थिए । केही वर्षसम्म त उनको धन्दा राम्रै चल्यो तर झुट कहाँ सँधै टिक्थ्यो र । बिस्तारै गाउँलेहरूले उनको धूत्र्यार्इ...
कश्यपको कथा : सत्य डग्दैन झुटो तग्दैन access_timeफागुन २, २०७८
एकदिन बिहान सबेरै राजा जगदादित्यसमक्ष आएर द्वारपालले भने– ‘महाराज ! बाहिर कोही आएका छन्, हजुरसँग तत्कालै भेट गर्न चाहन्छन् । छिमेकी मुलुकबाट आएको हुँ भन्छन्, देख्दा कुनै विशेष व्यक्ति वा राजदूत जस्ता लाग्छन् ।’ ‘सम्मानप...
बालकथा : सिंह र लामखुट्टेको शत्रुता access_timeमाघ २४, २०७८
भाइबहिनीहरूलाई कसैले सिंह र लामखुट्टे कुन ठूलो भनेर सोधे भने के भन्छौ ? पक्कै सिंह भन्छौ होला होइन ? हो, तत्काल सबैलाई लाग्ने त्यही हो, दिने उत्तर पनि त्यही हो । कहाँ जङ्गलका राजा सिंह कहाँ सानो जङ्गली जीव लामखुट्टे । तर, यो रूपामा मात्र हो सारमा होइन । सारमा त यही...
कश्यपको कथा : खानामा लोभ गर्दा जीवन जान सक्छ access_timeमाघ २, २०७८
कतिपय मानिस खानाका सौखिन हुन्छन् । उनीहरूलाई शरीरभन्दा खाना प्यारो लाग्छ र बिरामी हुँदासमेत खानपानमा परिवर्तन गर्न चाहँदैनन्, जसले गर्दा अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तलको कथाले पनि यस्तै सन्देश दिन्छ । एकादेशमा एक जना खानाका निकै स...
पौराणिक कथा : बलराम र रेवतीको विवाह यसरी भएको थियो access_timeपुस १९, २०७८
प्रसङ्ग् भागवतपुराणको हो । सत्ययुगमा रेवत नामका राजा थिए । चक्रवर्ती यी राजाले भूमण्डलका समग्र राजामहाराजाहरूलाई वशमा राखेका थिए । उनकी रेवती नामकी परम सुन्दरी कन्या थिइन् । उनको रूप र लावण्य जस्तो थियो शील र स्वभाव पनि त्यस्तै थियो । विवाहयोग्य भएपछि उनका निम्ति बाबुले...
बालकथा : ​सौतेलो छोरो access_timeपुस १८, २०७८
धनप्रसादकी श्रीमती मिनाको एउटा छोरो जन्मेको थियो । छोरोको नाम रोदन थियो । रोदन एक वर्षको हुँदा मिनाको मृत्यु भएको थियो । एक वर्ष पनि नबित्दै धनप्रसादले दोस्रो विवाह गर्‍यो । दोस्रो पटक विवाह गरेको श्रीमतीको नाम रुकमिणी थियो । वर्ष दिनपछि रुकमिणीले पनि छोरा जन्मा...
कश्यपको कथा : अरूलाई मूर्ख बनाउन खोज्दा आफैँ मूर्ख बनेका व्यापारी access_timeपुस ११, २०७८
संसारमा अनेक किसिमका ठग हुन सक्छन्, ठगी धन्धा चलाउने हुन सक्छन् । प्रहरी प्रशासन रोक्ने लागेकै हुन्छ, रोक्ने प्रयास गरेकै हुन्छ तर ठगहरू भने उनीहरूभन्दा एक पाइलो अगाडि पुगेर ठग्न सफल भइरहेका हुन्छन् । भाइबहिनीहरूका निम्ति यहाँ यस्तै कथा प्रस्तुत छ, जसले ठगहरूले कस्तोसम्म उप...
बालकथा : अङ्गुर अमिलोको आशय access_timeपुस ४, २०७८
नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘खान नपाएपछि वा नसकेपछि अङ्गुर अमिलो छ ।’ धेरै पहिलेदेखि चल्दै आइएको यो उखान अहिले पनि उत्तिकै प्रचलित छ । यसलाई भाइबहिनीहरूले पनि सुनेको हुनुपर्छ । नसुनेको भए पनि बाबा–आमा वा दाजु–दिदीलाई भनेर सुन्न सक्छौ त...
कश्यपको कथा : दुर्मुख राजाको दुर्व्यवहार access_timeपुस १, २०७८
कथा धेरै पहिलेको हो । कुनैबेला निर्ममपुरमा कुनै निर्दयी राजा थिए । दुर्मुख नामका यी राजाको स्वभाव पनि दुर्मुख नै थियो । रिसाहा र घमन्डी त्यस्तै । जाली र फटाहा त्यस्तै । उनी हरेक दिन केही अनुयायीका साथ शीघ्रगामी घोडामा गाउँ घुम्थे र विना कसुर लाञ्छना लगाई सिधासादा ज...
कश्यपको कथा : पण्डितजीको घमन्ड access_timeमंसिर १९, २०७८
धेरै पहिलेको कुरा हो । कुनै गाउँमा एक जना पण्डितजी बस्थे । उनी त्यतिबेलाका जानेमाने विद्वान् मानिन्थे । व्याकरणशास्त्रमा उनी बराबरका विद्वान् कोही थिएनन् तर जति विद्वान् थिए, त्योभन्दा बढी घमण्डी र अहङ्कारी थिए । शास्त्र भनेको व्याकरण मात्र हो र विद्वान् भनेको आफू मात्र हो भन्न...
बालकथा : अल्छी भ्यागुताको दुर्गति access_timeकात्तिक १०, २०७८
अल्छी वा आलस्य के हो भन्ने कुरा भाइबहिनीहरूलाई थाहै । भइहाल्छ नि, गरौँला न, अहिले नै के हतार छ र भन्दै निच मारेर बस्नु नै अल्छी वा आलस्य हो । तर त्यसको नतिजा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसो हो भने आऊ तलको कथा पढेर थाहा पाउने प्रयास गरौँ ।&nb...
कश्यपको कथा : धूर्त जोगीको दुर्दशा access_timeअसोज १०, २०७८
बालकथा : अर्जुनको परीक्षा access_timeभदौ २९, २०७८
भयावह अवस्था देखाउँदै निगमले पठायो सरकारलाई पत्र, के छ १० बुँदेमा ?
सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ कसरी जोगिए ?